အေထြေထြ – Thazin Media
မစိုးရိမ်စာသင်တိုက်ကြီးမှာ သီရိရွှေစင်ဓမ္မထေရိယ (၅)ထပ်ကျောင်းဆောင်တော်ကြီးဆောက်လုပ်လှုဒါန်းခဲ့တဲ့ အလှူရှင်
Kwee Zaw August 17, 20190Comments 0
သီရိရွှေစင်ရွှေဆိုင်ကြီးမှာ အစဉ်အမြဲအားပေးနေကြသော မိတ်ဆွေများအားလုံး ကြည်ညိုသဒ္ဒါပွားများနိုင်စေရန် တင်ပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်။ မိတ်ဆွေများရဲ့တခဲနက်အားပေးမှု့ကြောင့် ယခုလိုမစိုးရိမ်စာသင်တိုက်ကြီးမှာသီရိရွှေစင်ဓမ္မထေရိယ(၅)ထပ်ကျောင်းဆောင်တော်ကြီးဆောက်လုပ်လှုဒါန်းနိုင်ခဲ့ပါပြီရှင်။ စာသင်သံဃာတော်အပါး(၂၀၀)သီတင်းသုံးမည်ဖြစ်ပါသည်။ စာဝါများကို ဝါခေါင်လဆန်း(၁)ရက်နေ့မှ စတင်၍နာယကဆရာတော်များမှစာဝါပို့ချနေပြီဖြစ်ရာ ကျွန်တော်တို့၏ (၅)ထပ်ကျောင်းတော်ကြီးပေါ်တွင်စာဝါတက်သော သံဃာတော်အပါး(၆၀၀)ကျော်ရှိကြောင်း သိရပါသည်။ ထို့အတွက်ကြောင့် အလွန်ပင်ဝမ်းသာပီတိဖြစ်ရပါတယ်ရှင်။ ဤကုသိုလ်အားလုံးတို့သည် မိတ်ဆွေများလည်း ကျွနုပ်တို့နှင့်ထပ်တူထပ်မျှရရှိကြမည် ဖြစ်ပါတယ်။ (ရရှိသောကုသိုလ်အစုစုတို့ကို မိတ်ဆွေများအားလုံးနှင့် (၃၁)ဘုံသားများ အားလုံးအားအမျှပေးဝေပါတယ်ရှင်။) ခရက္ဒစ္ Unicode Version သီရိရွှေစင်ရွှေဆိုင်ကြီးမှာ အစဉ်အမြဲအားပေးနေကြသော…
ကားရေမြုပ်သွားရင် လုပ်ဆောင်ရမယ့် အချက် ၆ ချက် မိမိကားကို ပါကင်ထိုးထားပြီး တစ်နေရာရာကို သွားနေချိန် မိုးရွာပြီး လမ်းရေကြီးလို့ ကားရေမြုပ်သွားရင် ဘာဆက်လုပ်မလဲ။ မိုးရေထဲ ကားမောင်းနေရင်းနဲ့ မထင်မှတ်ပဲ ကားစက်ရပ်သွားရင် ဘယ်လိုဆက်လုပ်မလဲ။ လမ်းကျပ်နေလို့ ကားကို စက်နှိုးပြီးရပ်ထားတုန်း လမ်းပေါ်ရေတွေတက်ပြီး ရုတ်တရက်ရေကြီးလာရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ ၁။ မိမိကားဘယ်လောက်ထိရေမြုပ်နေသလဲဆိုတာကို စစ်ဆေးပါ။ တကယ်လို့များ ကားတံခါး အောက်ခြေထက်မပိုပဲ…
မန္တလေးမှာ ဖြစ်သွားတဲ့ အဖြစ်ကတကယ်ကိုလူတွေရဲ့အောက်တန်းကျမှုကို ဖော်ပြတာပဲ
Thazin Media August 5, 20190Comments 0
မန္တလေးသူ/သား များ သတိထားစေဖို့ပါ ဒီနေ့ ညနေက မန္တလေးသူ/သား များ သတိထားစေဖို့ပါ ဒီနေ့ ညနေက မိတ်ဆွေတစ်ယောက် ကိုယ်ပိုင်ကားနဲ့ အပြင်သွားတုန်း ၈၂ လမ်း၊ လမ်း ၈၀ အရောက်မှာ သူ့ကားကို နောက်က ဆိုင်ကယ်တစ်စီးက အရှိန်မပါဘဲ ဝင်တိုက်လိုက်ပါတယ်၊ တိုက်သံကြားလို့ နောက်လှည့်ကြည့်လိုက်တော့ အရှိန်လည်းမပါ လူလည်း မထိတာနဲ့ ရှေ့ဆက်သွားခဲ့ပါတယ် လမ်း…
အရိမေတ္တေယျ ဘုရားရှင် အားဖူးတွေ့ရပြီး နိဗ္ဗာန်သို့ အရောက်လှမ်းနိုင်မည့် အချက် ၁၀ ချက်
Kwee Zaw July 31, 20190Comments 0
၁။ မိမိကိုယ်တိုင် သာသနာ့ဝန်ထမ်း ရှင်ရဟန်း ပြုလုပ်ပါ။ ၂။ ကိုယ်၏ရင်သွေး ဖြစ်စေ သူတပါးတို့၏ရင်သွေးဖြစ်စေ ရှစ်ဖြာပရိက္ခရာစုံလင်စွာဖြင့် သာသနာ့ဘောင် သို့ သွပ်သွင်း ချိးမြှောက်ပါ။ ၃။ သရဏဂုံ သုံးပါးနှင့် ငါးပါးသီလကို လုံခြုံ အောင်စောင့်ထိန်းပါ။ ၄။ ဗောဓိညောင်ပင်စိုက်ပျိုးလှူဒါန်းပြီး ညောင်ရေ သွန်းလောင်းပါ။ ၅။ စေတီ ဇရပ်များ တည်ဆောက်လှူဒါန်းပါ။ ၆။ မိဘနှစ်ပါးကို…
မကြာခင် အောင်ဘာလေ ထီဆုကြီး ဖွင့်မှာဖြစ်လို့ ထီပေါက်ခဲ့ရင် ဘယ်လိုထုတ်ရမလည်းဆိုတာ သိချင်တဲ့သူတွေအတွက်
Thazin Media July 30, 20190Comments 0
ထီပေါက်ခဲ့ရင် ..ဘယ်လိုထုတ်ရမလည်းဆိုတာ… သိချင်တဲ့သူတွေအတွက် ..တင်ပေးလိုက်ပါတယ်ရုံး ချုပ်ရောက်ရင် အပေါက်ဝမှာ အဝင်အထွက်စစ်ဆေးတဲ့ အန်တီ(သို့)ဦးလေးကို ထီသွားထုတ်မလို့ ပြောပြီး နာမည်ရယ် မှတ်ပုံတင်ရယ်ရေး လက်မှတ်ထိုးရပါမယ် ပြီးရင် ၃လွှာကို ဓါတ်လှေကား (သို့) ရိုးရိုးလှေကားက တတ်သွားပါ ဝင်ဝင်ချင်း ဓါတ်လှေကားဘယ်ဘက်ခြမ်းမှာ ထီဆုငွေများထုတ်ယူရန်ဆိုပြီး ရေးထားတယ် အာ့မှာ ပေါက်တဲ့ ထီလက်မှတ်တွေကို ထုတ်ပေးပါတယ်။ အဲဒီ ထီလက်မှတ်နောက်ကျော ဘယ်ဘက်ခြမ်းမှာ…
‘‘ အမျိုးသား ဆုံးပါသွားသော်လည် ၁၁ နှစ် တိုင်တိုင် သားသမီး ၆ ယောက် နဲ့ဆိုင်ကယ် စက်ဘီးပြင်ရင်း ကြိုးစားခဲ့တယ် ’’ လို့ ဆိုလာသူ ဒေါ်စန်းကြည်
Thazin Media July 29, 20190Comments 0
စာဖတ်ပရိသတ်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ… ယခုတစ်ခါတင်ဆက်ပေးမယ့် ရုပ်သံကတော့ ဖခင်မရှိတော့တဲ့ သားသမီး ၆ ယောက်အတွက် ၁၁ နှစ်တိုင်အောင် စက်ဘီး ဆိုင်ကယ်ပြင်ပြီး ရှာကျွေးခဲ့သူ မိခင်ဒေါ်စန်းကြည်ရဲ့ အကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်…. အဖွားဒေါ်စန်းကြည်ဟာ အသက် ၆၅ နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပြီး…. ယောကျာ်းဆုံးတဲ့အချိန်ကစပြီး ဆိုင်ကယ် စက်ဘီးတွေကို စပြင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်… စပြင်တဲ့အချိန်မှာ အခက်အခဲတွေရှိခဲ့ပေမယ့်… လက်ရှိအချိန်မှာတော့ ထမင်းစားရေသောက်အဆင့်ကို ရောက်လို့နေပါပြီ….. တော်ရုံယောကျာ်းတွေတောင် စက်ပြင်လုပ်ငန်းကို မလုပ်နိုင်ကြပေမယ့်……
ဆရာတော် အရှင်ဆန္ဒာဓိက၏ ထူးခြားအံ့ဖွယ်ကောင်းသော သေတမ်းစာအလှူ
Kwee Zaw July 29, 20190Comments 0
ဦးဇင်း သေရင်တော့ မျက်ကြည်လွှာတို့ နှလုံး၊ အသည်း၊ ကျောက်ကပ် စတဲ့ အတွင်းကလီစာတို့၊ တခြား အစားထိုးကုသလို့ရတဲ့ ခန္ဓာကိုယ် အစိတ်အပိုင်းတို့၊ သုံးလို့ရတာတွေကို လိုအပ်တဲ့ လူနာတွေ အတွက် ခွဲဝေပြီး အသုံးပြုလိုက်ပါ။ လက်ဆစ်တစ်ဆစ် လိုလည်း လက်ဆစ်တစ်ဆစ်၊ အကြောတစ်မျှင် လိုလည်း အကြောတစ်မျှင် လိုရာဖြတ်တောက်ယူပြီး သုံးကြပေါ့။ လူနာတွေ အတွက် သုံးလို့ရသမျှ အကုန်လုံး…
“ထေရဝါဒ နဲ့ မဟာယာန ဘာတွေကွာလဲ ဘုရား”
Kwee Zaw July 28, 20190Comments 0
ထေရဝါဒက မြတ်စွာဘုရား ဟောတော်မူခဲ့တဲ့ ဘုရားသုံးဆူကို လက်ခံပါတယ်။ (၁) သမ္မာ သမ္ဗုဒ္ဓ၊ “ဘုရားမကူ သယံဘူ” ဆိုတဲ့ ကိုယ့်ဘာသာ တရားအားထုတ်ပြီး သစ္စာလေးပါးကို ကိုယ်တော်တိုင် တွေ့မြင်ပါတယ်။ အမြင့်မြတ်ဆုံး တရားဓမ္မကို အားလုံး နားလည်နိုင်အောင် ဟောတော်မူနိုင်ပါတယ်။ (၂) ပစ္စေကဗုဒ္ဓ ဘုရားငယ်။ သူလည်း “ဘုရားမကူ သယံဘူ” ဒါပေမဲ့ သစ္စာလေးပါးကို လူတိုင်း…
မြန်မာတွေကို မရောင်းဘူးဆိုတဲ့ ဦးပိန်တံတားအနီးက “သာသုံးကြား” တရုတ် စားသောက်ဆိုင်..
Thazin Media July 27, 20190Comments 0
( Video ဖိုင်ကို အောက်ဆုံးမှာတွဲပြီး တင်ပေးထားပါတယ် ) မင်္ဂလာပါ စာရှုသူတို့ခင်ဗျာ.. အခုတစ်ခါတင်ဆက်ပေးချင်တဲ့ သတင်းရုပ်သံဖိုင်လေးကတော့ မြန်မာတွေကို မရောင်းဘူးဆိုတဲ့ ဦးပိန်တံတားအနီးက “သာသုံးကြား” တရုတ် စားသောက်ဆိုင်..အကြောင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဆိုင်တာဝန်ခံက မြန်မာဖြစ်ပြီး၊ ဆိုင်ပိုင်ရှင်ကတော့ တရုတ်လူမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဆိုင်မှာ တရုတ်အစားအစာသာ အဓိကထားရောင်းပြီး မြန်မာလူမျိုးတွေကို မရောင်ဘူးဆိုတဲ့အပေါ်မှာ တစ်စတစ်စ လူပြောများပြီး လူသိများသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဆိုင်ဟာ…
ဗုဒ္ဓနိမိတ်ကြောင့် ဘဝကူးကောင်းခဲ့သည့် အမေညို ( ဖြစ်ရပ်မှန်လေးပါ )
Kwee Zaw July 27, 20190Comments 0
ဒေါ်ညို တစ်ယောက် မရတော့ဘူး တဲ့။ ဆေးရုံကတောင် ပြန်သယ်လာပြီ။ အသဲကင်ဆာ ဆိုလား-? အမေညို ကလေးဘဝက သူတို့ရဲ့ ခြံဝိုင်းထဲမှာသွားဆော့တိုင်း သမီး သမီးနဲ့ မုန့်အမြဲ ကျွေးနေကျ။ အမေညိုဟာ ဘဝကြမ်းတမ်းသူမို့ အပြောဆိုးသလောက် စိတ်ရင်းကတော့ ဖြူစင်ပါတယ်။ ခင်ပွန်း ဆုံးပါး သွားပြီး ကတည်းက သမီးနှစ်ယောက်ကို ငါးရောင်း ကျွေးရင်း ဘဝကို ရုန်းကန်…